Cunista xanuunada marka aad qabto dhibaatooyin cunaya, maxaa yeelay, aad leedahay fikrado xun xun oo ku saabsan jirkaaga. Waxaad mari kartaa miisaanka isbedel aad u daran.
image Body ka dhigan tahay sida aad dareemayso ee ku saabsan jidhka iyo sidee aad u malaynayso in looks jirkaaga. Iyada oo wax cunaya disorder, inaad Caadeysiga cunto aad loo xakameeyo Oozank ka dhigi kartaa isbedel weyn. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad wax yar oo cuno maalin kasta, maxaa yeelay, aad aad dareento waa buuran xitaa marka ay aadan. Qof kasta oo lahaa disorder cunidda ah. Laakiin dumarka badan ku xanuunsado ka cilad la xiriirta cunitaanka badan ragga.
anoregsiya waa marka ay hooseeyo, laakiin aad weli isku dayaysa in ay lumiyaan miisaan. Miisaanka oo yaraada ka dhigan tahay in aadan beehaysaan kuna filan adiga iyo dhererka iyo da'da. Haddii aad qabto, tusale:
Waad joojin kartaa cunidda.
Waxaad ku tababaran kartaa badan.
Waxaad daawada qaadan kartaa ilaa aad aaddo suuliga badan.
Aad u malaynayso in aadan qof wanaagsan, sababtoo ah sida aad u malaynayso in jirkaaga.
Waxaan ka cabsanayay in ay helaan miisaanka inkastoo aad ay dhibaatadu ka hooseeyo.
hunqaacinta waa marka uu qofku cuno cunto aad u badan mararka qaarkood iyo dareemayaa ma xakamayn karto waxa aad cuni. Ka dib marka aad cuni badan oo cunto ah, aad dareento in aad qabto in laga takhaluso cuntada. Haddii aad qabto hunqaacinta:
Aad u malaynayso in aad u badan oo in qaabka jidhka iyo miisaanka.
Adiga ayaa ka dhigi kara in ay soo mantagi ka dib waxa aad cuni badan oo cunto ah.
Waxaad ku tababaran kartaa ka dib markaad cunto cunto aad u badan.
Waad joojin kartaa cunista muddo dheer ka dib cunista badan oo cunto ah.
Binge cunidda markii badan oo cunto ah wax looga qabto iyo dareemayaa ma kaa joojin karaan. Cun wax badan oo cunto ugu yaraan laba jeer todobaad kasta, waayo, 6 Months. Badanaa waxa aad dareentaa murugo iyo ceeb iyo danbi ka dib cunista.
Qaar kale waxay kuu sheegaysaa in aad tahay oo aad u buuran ama wanaagsan ma eegi.
Dareemaan cadaadis oo dad kale in ay lumiyaan miisaan. Tusaale ahaan, haddii aad u qaabeeyaan ama qoob ka ciyaarka, waxaa sheegayaa dadka in aad u baahan tahay in ay lumiyaan miisaan.
Waxaad leedahay hooseeyo isku kalsoonaanta. Low isku kalsooni waa marka aadan u malayn in aad tahay qof wanaagsan ama marka aadan u malayn in wax kasta oo aad samayn karto.
Waxaad qabto wax dareen ah. Walaaca waa marka ay dareemaan aad u nervous xitaa marka ma jirto sabab ay u dareemaan habdhiska.
xubnaha qoyskaaga qabtid jirro wax cunaya ama caqabad kale oo caafimaadka maskaxda.
xanuunada cunidda halis ah. Haddii aadan caawimaad ka heli, aad dhaawici karaan jirkaaga si xoog leh. Dadka intooda badan uma baahna daawooyin, laakiin dadka qaar u baahan yihiin in la therapist ama naftayda dhowr sano ka hadlaan.